Vhidhiyo: Chengeta, Kuhwina, Kura uine Right On Inopindirana | Martech Zone
NeChishanu, Nyamavhuvhu 2, 2013 China, July 10, 2014 Douglas Karr
Imwe yekiyi dzatakaona mubhizinesi redu pachedu ndeyekuti imwe mhando yevatengi ndiyo kiyi yekubudirira kwevatengi pamwe neyedu. Zvimwe zvacho zvine chekuita nezviwanikwa, zvimwe nemaindasitiri avari uye mazhinji acho ari ekuziva kukosha uye kudzoka pane kudyara. Isu tangova namakore mashanu ekuberekwa uye muyedzo mumakore ekutanga mashoma yaive yekutora kune chero mutengi anogona kusaina cheki. Hatichazviitizve… isu tinonyatso chenjera kuti ndiani anotiroja.
Pamwero wakakura, ndinotenda ichi ndicho chakakosha pakubudirira kwekambani yega yega. Makambani akawandisa anongomanikidza kuwana chero munhu muchibvumirano, uyezve vanonetswa nenyaya dzekutsigira, mutero wevatengi, kubhadharisa uye makakatanwa ebasa, uye kusarongeka kwezvavanotarisira.
Right Pane Inopindirana mubatsiri uye isu tiri zvakare shamwari dzakanaka nekambani. Kana mabhizinesi ari kutsvaga kwekushambadzira otomatiki kunyorera, yakawanda yekutarisisa inoiswa pane zvitsva zvinotungamira, fanera uye shanduko. Kugovera inoiswa, ichipa pamberi pevamwe firmagraphics kana hunhu hwakavakirwa pamunhu anenge achinyorera… asi pane mukaha muhombe muhungwaru hwavo
Gap iri nderekuti otomatiki masisitimu anowana vanhu vanogona kunge vakagadzirira kusaina… asi usazvienzanisa chaizvo nehunhu hwevatengi vako nehunhu. Uye ivo havana hanya nehunhu kune hunhu uye hunhu hwevatengi vako varipo. Isu tese tinoziva kuti zvinodhura zvakanyanya kuchengetedza mutengi zvazvino pane kuenda kunotsvaga uye kukwira imwe nyowani.
Kushambadzira hakusi kwehuwandu hwevashanyi, zvinotungamira kana kunyange shanduko dzauinadzo. Kushambadzira kukuru kuri pamusoro pekunzwisisa kuti vatengi vako ndivanaani, kutsvaga zvimwe zvakafanana navo, kuvaita kuti vafare, uye kukura hukama navo. Right On Interactive inoti zvakakwana… Kuhwina, Chengeta, Kura.
Dhawunirodha kurudyi pane iyo eBook, Chii chinonzi Lifecycle Kushambadzira zvino!
Tags: 3d zvibodzwakushandisa michinakuchengetwa kwevatengiHupenyu hwekushambadzirakuchengetwakurudyi pane kudyidzanascging
Ndatenda Douglas, ndichafanirwa kuongorora izvi.